आजदेखि न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओ निष्कासन, कति दिने आवेदन? – Pahilo Page
आजदेखि न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओ निष्कासन, कति दिने आवेदन?
१५ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०८:२८ 259 पटक हेरिएको
काठमाडौं । आजदेखि न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधरणका लागि आईपीओ निष्कासन गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरका २२ करोड ५० लाख रुपैया बराबरको २२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो ।
उक्त आईपीओमा सर्वसाधारणले असोज १९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । सो अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा असोज ३१ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा ५० हजार कित्ता शेयर खरीदका लागि आवेदन दिन सकिनेछ ।
कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएकमा सम्पूर्ण सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।